Mogadishu Journal » 2018 » July » 10
France oo iska xaadirisay Finalka Koobka Adduunka 12 Sano Kadib
Xulka qaranka France ayaa sii wada qaab ciyaareedkiisii fiicnaa isaga oo iska xaadiriyay finalka koobka adduunka Russia 2018 kadib markii ay guul ka gaareen xulka qaranka Belguim. Belguim ayaa si dar-dar leh ku bilaabatay ciyaarta iyaga oo sameeyay fursado waali ah oo ay ku...
Wiil walaalkiis ku dilay Muqdisho
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya degmada Howlwadaag gaar ahaan Waaxda Xaawo Taako ayaa waxa ay sheegayaan in nin dhalinyaro ah oo dhawaan ka yimid dalka dibadiisa uu ku dilay Walaalkiis. Sidda ay sheegeen dadka degaanka dilka wiilka waxaa uu u adeegsaday Toorreey, waxaana la...
Shacab ku dhintay rasaas lagu furay gaari ay la socdeen
Mjournal :-Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe, ciidamo ka tirsan Booliska Hirshabeelle ayaa rasaas ku furay gaari BL-ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah, kaasi oo marayay duleedka degaanka Qalimoow oo ka tirsan gobolkaasi. Ciidankan ayaa in ay...
Farmaajo iyo Xassan Sheekh oo ku kulmay Turkiga
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kulan kula qaatay Magaalada Ankara ee dalka Turkiga Madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. “Waxaan maanta kula kulmay magaalada Ankara Madaxweynihii hore Mudane Mudane Xasan Sheekh...
Madaxweynaha Turkiga oo wiil uu Soddog u yahay u magacaabay Wasiir
Mjournal :-Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wiilka uu soddoga u yahay u magacaabay wasiirka maaliyadda dowladiisan cusub. Kadib magacaabista Berat Albayrak lacagta Turkiga ee lira ayaa in kabadan boqolkiiba labo qiimeheedu hoos u dhacay. Mr Erdogan ayaa dowladiisa...
Shariif Xasan “AMISOM waa ku fashilmeen inay isku furaan waddooyinka ay go’doomisay Al-Shabaab
Mjournal :-Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ku eedeeyay ciidamada AMISOM inay ku fashilmeen inay isku furaan waddooyinka ay go’doomisay Al-Shabaab ee deegaanada Koofur Galbeed. hariif Xasan ayaa sheegay sheegay dhibaatooyin badan ay ka jiraan...
Wasiirkii caafimaadka Britain oo badalay Boris Johnson
Mjournal :-Xoghayaha caafimmaadka ee dalka Britain, Jeremy Hunt ayaa loo magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee Britain, kadib markii uu xilkaasi iska casilay Boris Johnson. Ra’iisul wasaaraha Britain, Theresa May ayaa la kulantay cadaadis xoogan oo kaga imaanayay...
Trump oo Brett Kavanaugh u Magacaabay Xaakimka Maxkamadda Sare
Mjournal :-Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa garyaqaan Brett Kavanaugh u magacaabay inuu noqdo mid ka mid ah xeer-ilaaliyaasha Maxkamadda Sare ee Mareykanka, si uu u bedello booska uu banneeyay Justice Anthony Kennedy oo howlgab noqday. Munaasabad ka dhacday Qolka Bari ee...
AMISOM” Talaabo ayaan ka qaadeynaa Al-shabaab
Mjournal :-AMISOM ayaa sheegtay in ururka Al-shabaab ay kordhiyeen Argagixinta shacabka Soomaaliyeed, balse waxay tilmaamtay in shacabka aysan marnaba ku niyad jabi doonin dhacdooyinka kala duwan. AMISOM ayaa hadalkan la xiriirisay weerarkii qaraxa ku bilowday oo Shabaab ay ku...